DLULA IBreguet 941 S FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 56.4 MB
Play 4 193
Kubuyekeziwe on 01 / 19 / 2020: Ifayela "Izindiza.cfg": ukuguqulwa kwevolumu. Ifayela elithi "breguet_check.htm" kanye nezithombe ezinamathiselwe kulo zichaza uhlu langempela lokuhlola i-Bréguet futhi alusekho uhlu lokuhlola olujwayelekile.
Kuyintokozo ukuthi semukela le "Bréguet 941 S" entsha eyenziwe nguPatrick Le Luyer. Lesi sengezo kungukuphela kweBreguet 941 S okukhona njengamanje eFreeware, sibonga kakhulu umbhali ngokwabelana ngendalo yakhe nomphakathi waseRikoooo.
Kuhlanganiswe ne-cabin kanye ne-cockpit ebonakalayo, iphaneli ye-2D, imisindo eyenziwe ngezifiso, ama-chiries amane, uhlu lokuhlola nezinkomba, imibhalo ngesiFulentshi nesiNgisi
Isengezo senzelwe FSX / FSX-SE futhi iyahambisana Prepar3D 4.
IBreguet 941 indiza yezokuthutha ye-ADAC (STOL ngesiNgisi) evela kumkhiqizi waseFrance uBréguet. Inokuhlukahluka ngokuthi iphiko lishaywe ngokuphelele ngabangenisi kanye namabhande angakwazi ukubeka ku-95 °, okuvumela ukuba ufike kumabanga amafushane kakhulu. (Umthombo weWikipedia)
Izwi elivela kumlobi: "Ngalingisa i-Bréguet 941 S ngenkathi ngizama ukusondela ngangokunokwenzeka, kodwa njengoba iyindiza ethile, angikwazanga ukuzala konke ngoba i-Flight Simulator ayiyivumeli ngemisebenzi yayo eyisisekelo ngaphandle kokuthola izandla zami kuhlelo lobuchwepheshe olujulile. , engingakwazi. Njengoba ngiseyizimfundamakhwela futhi ngisebenza ngedwa, kungithathe iminyaka engaphezulu kwemibili ukufinyelela umphumela wokugcina."
I-Dassault Falcon 7X ye FSX